”အဆုံးသတ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ”အဆုံးသတ်”	9
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 13, 2015 in Poetry |9comments
ဇီဇီခင်ဇော် says: လက်တည့်အူးမှကိုးအေ..!!
Alinsett @ Maung Thura says: မထိသေးဘူး လို့…. မထိသေးဘူး..ဆိုပြီး… မထိမချင်း ဘေးက အော်ပေးမယ့်သူတွေ ရှိနေရင်..
မှန်သွားမှာနော့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2399
aye.kk says: တင်းတော့ပြတ်
HMM says: ပျံပြမယ်ဆိုတော့ မျှားမှာဘာတပ်ထားမှာတုံး..
ဟေသီ says: အဲ့လိုမှန်ဖို့ ဆိုတာလည်း မျှားမကုန်ခင် မှန်အုံးမှကို…….
manawphyulay says: မေတ္တာသည်သာ
Mike says: .အဆုံးသတ်
.တစ်ဆုံးမှတ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12185
Alinsett @ Maung Thura says: ဖတ်ရှု သွားသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျား…
အချိန်မရသေးလို့… တစ်ယောက်ချင်းစီ ပြန်မပြောနိုင်သေးဘူး…။
ဖုန်းကလည်း ပျောက်သွားပြီဆိုတော့..အင်တာနက်ဆိုင် ပြေးရတာလည်း…အိမ်ကနေ ဝေးးးးးး
naywoon ni says: မ​ရှောင်​ရင်​ လွဲတယ်​ဆိုလား ??????